हराउदै गएको चर्खा महिलाको आयआर्जनको स्रोत बन्दै « प्रशासन
हराउदै गएको चर्खा महिलाको आयआर्जनको स्रोत बन्दै
चितवन । चितवन पदमपुरका ६० वर्षीया वृद्धा सुखमाया तामाङ हातमा ऊनीको धागो च्यापेर आइन् । तौलँदा दुई किलो १०० ग्राम भयो ।
चाउरी परेको अनुहारमा चमक देखिन्थ्यो । उनले भनिन्– “अलेली सहयोग हुन्छ । एकछिन एकछिन हो बाबु । भैँसी छ, बाख्रा छ, त्यो एकछिन एकछिन बस्या बेला गर्ने हो । यसमा मात्रै ध्याउन्न हुन्न ।” दुई दिनको फुर्सदको समय निकालेर दुई किलो १०० ग्राम धागो काटेकी सुखमायाँ झण्डै ३०० बुझेर गइन् ।
एकै छिनमा यसैगरी धागो च्यापेर संस्थामा आए वृद्ध हिमलाल घले । चार दिनमा दुई किलो ऊन तयार पारेको बताउने उनी संस्थाबाट २८० बुझेर गए । महिलाले सिकेको कामले पुरुषलेसमेत फाइदा लिँदै छन् भन्ने उदाहरण उनी हुन् ।
पहिले यहाँका महिलालाई १०० जम्मा गर्न धौधौ थियो । चर्खा कार्यक्रम शुरु भएपछि उनीहरुलाई वैकल्पिक पेशा गर्न ऊर्जा मिलेको छ । एकसय बचत गर्न नसक्नेहरु अहिले सहकारीमा १२ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी जोहो गर्न सफल भएका छन् ।
एकसय बचत गर्न नसक्नेहरु अहिले सहकारीमा १२ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी जोहो गर्न सफल भएका छन् ।
हराउँदै गएको यो पेशा चितवनको पूर्वीक्षेत्र पदमपुरमा भने कायमै छ । यहाँका स्थानीय महिला अहिले फुर्सदको समयको भरपूर उपयोग गर्दै चर्खा घुमाउँछन् । कालिका नगरपालिका– २ पदमपुरका बुद्धिमाया घले पनि ऊन काछन् । चर्खा चलाएपछि यहाँको महिलामा फुर्सदको समय मजैले सदुपयोग भएको र आम्दानी पनि बढेको बुद्धिमायाको अनुभव छ ।
उनीमाथि कच्चा पदार्थ (भेंडाको रौँ) ल्याउने, दिदीबहिनीलाई धागो काट्न लगाउने र तयारी ऊन बनाएर फेरि पठाउने व्यवस्थापनको जिम्मा छ । यो गरेबापत उनले १० प्रतिशत ‘कमिसन’ पाउछन् । यहाँ अहिले २६० महिलालाई चर्खा वितरण भएको छ । एक सय २० जना चर्खा समूहमा आबद्ध छन् ।
गाउँमा उनीहरु नै संलग्न भएर खोलेको चेतना चेली बहुउद्देश्यीय सहकारीले पनि ८० जना महिलालाई चर्खा दिएको चर्खा समूहका सचिव तथा सहकारीकी अध्यक्ष सत्यादेवी श्रेष्ठ बताउछिन् । अहिले बुढापाका, महिला सबैले सानो कमाइसमेत बचत गर्न थालेको उनी बताउछिन् । १०० जम्मा गर्न नसक्नेको अहिले १२ हजार रुपैयाँसम्म सहकारीमा जम्मा भइसक्यो ।
“त्यही हो मासिक १०/१५ क्विन्टलसम्म ऊन बन्छ,” बुद्धिमायाले भनिन्– “गाउँका महिलाले नजानिँदो किसिमले आम्दानी गरेका छन् ।” चर्खा चलाएर एक किलो ऊन काटेको ज्याला १४० छ । फुर्सदको समयमा महिला दिनमा दुई किलोसम्म ऊन काट्छन् । सहयोग पाउने हो भने यहीँ व्यवस्थापन गर्नसक्ने उनी बताउछिन् ।
पहिले पहिले फुर्सद भयो कि जंगल जाने, दाउरा खोज्ने, अनि बिक्री गर्ने चलन अहिले चर्खाले हटाउँदै लगेको छ ।
कोषका कार्यक्रम अधिकृत सन्तोष भट्टराईका अनुसार पहिले महिला फुर्सद भएपछि दाउरा संकलन गरेर बिक्री गर्थे । अहिले फुर्सदको समय सदुपयोग गरेर घरमै आर्थिक उपार्जन गर्छन् । जंगलमाथिको मानवीय चाप घटाउन चर्खा कार्यक्रम ल्याइएको कोषका कार्यक्रम सहायक परमानन्द गर्ग बताउछन् ।
कच्चा पदार्थ दिने र उत्पादित ऊन तथा गलैँचा लिने काम युनिक ऊनी धागो उद्योग काठमाडौँले गर्छ । उद्योगका सञ्चालक मोहन सुवेदी अहिले मेसिनका कारण हातले बुनेको ऊनको माग घट्दै गएको दुखेसो गर्छन् ।
“कोहीकोही हातले नै बुनेको भनेर अर्डर गर्छन्, उनीहरुका लागि जेनतेन धानेका छौँ,” सुवेदीले भने– “नेपालीले खपत गर्न सक्दैनन्, सबै बाहिर पठाउनुपर्छ । अर्डर नै छैन बाहिर, मजदुरलाई काम दिनै गाह्रो भो ।”
सामुन्नेमा बुट्टैबुटा भएको नक्शा छ । छेउमा फरकफरक रङ्गका पाँच÷सात वटा डल्ला ऊन छन् । ती ऊन नम्बरअनुसारका छन् । अगाडि गलैँचाको तानमा नक्शा हेर्दै गलैँचा बुन्दै छिन् पदमपुरकी लीला लामा ।
“कुन ठाउँमा कुन रङ्गको बुट्टा राख्ने पहिल्यै खुट्याउनु पर्छ, नत्र बुट्टा मिल्दैन” लामाले भनिन्– “धेरै बुट्टा भएको गलैँचा बुन्न साह्रै दिमाग लगाउनुपर्छ ।” कुन बुट्टामा कति नम्बर धागो जान्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने उनी बताउछिन् ।
घर बनाउने मजदुर थिइन् लीला । टपटपी पसिना चुहाएर घोटिनुपथ्र्यो । न शरीरलाई सुविस्ता न स्वास्थ्यको ख्याल । कहिले त महिनौँसम्म पनि काम पाइन्थेन । तीन बच्चा र श्रीमानसहितको पालनपोषणको जिम्मा उनकै थियो ।
‘कतिन्जेल यो श्रम गर्ने, बल छउन्जेल त हो अनि के गर्ने ?’ उनको मनमा खुल्दुली हुन्थ्यो । त्यसपछि चर्खा चलाउन थाल्नुभयो । शुरुमा चर्खाबाट राम्रै आम्दानी गरेकी उनले अझै आम्दानी बढाउन गलैँचा बुन्दै छिन् ।
“काठमाडौँमा १५ वर्षअघि सिकेको शीप अहिले काम लाग्यो,” हाँस्दै बुद्धिमायाले भनिन्– “एक महिनामा एउटा सजिलै तान खस्छ ।”
“घर बनाउनेमा दैनिक काम हुन्न, यो भित्र बसेर बुन्ने हो, जति छिटो बुन्यो आफूलाई फाइदा, यो त सजिलो पेशा भएर लेबर छाडेको”– विगतको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन् ।
पछिलो समयमा यहाँका महिलाले गलैँचासमेत बुन्न शुरु गरेका छन् । देवी विक, लीला लामा, ललिता प्रजा, बीमा थिङ र शान्ति गुरुङ गलैँचा बुनेर आम्दानी बढाउँदै छन् । सामान्यतः एक थान गलैँचा बुनेको उनीहरुले सात हजार ज्याला पाउछन् । एक थान गलैँचाको बढीमा १८ हजार रुपैयाँसम्म पाउने गरेको बुद्धिमायाको भनाइ छ । चितवनको पदमपुरबाट पाँच वटा गलैँचा बुनेर पठाइसकिएको छ । गरिब न्यून आय भएकाका लागि यो कार्यक्रम निकै उपयोगी छ ।
तत्कालीन महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषले वि.सं. २०६१ बाटै पाँच समूह गठन गरेर चर्खा कार्यक्रम ल्याएको थियो । बुद्धिमायाकै नेतृत्वमा यहाँ १०० चर्खा बाँडियो । चितवन निकुञ्जको जंगलबीचमा बसेको साविक पदमपुर गाविस नै स्थानान्तरण भएकाले उनीहरुलाई आयआर्जनमा सहज पार्न यो कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो ।
कोषका प्रमुख डा. चिरञ्जीवी पोखरेल विपन्नलाई जंगलमा आश्रित हुन नपरोस्, उनीहरुको फुर्सदको समयको सदुपयोग होस् र आय बढोस् भन्ने उद्देश्य कार्यक्रमको रहेको बताउछन् ।
व्यवस्थापन अभावमा वि.सं. २०६४ मा चर्खा कार्र्यक्रम बन्द भएको बुद्धिमाया बताउछिन् । वि.सं. २०७० को जेठ महिनादेखि कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा आयो ।